बढ्यो सुनचाँदीको भाउ ! हेर्नुहोस् आज प्रतितोला कतिमा हुँदैछ कारोबार…… – SUDUR MEDIA
काठमाडौँ । आज मिति २०७८ साल भदौ १ गते मंगलबार अर्थात् साताको तेस्रो दिन नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ । हिंजो सोमबार प्रतितोला १ सय रुपैयाँले घटेको सुनको भाउ आज भने प्रतितोला ४ सय रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार, आज छापावाल सुन प्रतितोला ९१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । छापावाल सुन हिंजो सोमबार प्रतितोला ९० हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, आज तेजावी सुन प्रतितोला ९० हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । तेजावी सुन हिजो प्रतितोला ९० हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
यस्तै, आज चाँदीको भाउ पनि बढेको छ। आज चाँदी प्रतितोला १२ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदी हिजो प्रतितोला १२ सय रुपैयाँ कारोबार भएको थियो । लामो समयदेखिको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारी र लकडाउनसँगै ह्वात्तै बढेको सुन चाँदीको मूल्यमा पछिल्लो समय केही घट्बढ् हुने गरेको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः आजबाट अनलाइनबाटै आफ्नो सवारीको राजस्व भुक्तानी र ब्लुबुक नवीकरण गर्न सकिने ! हेर्नुहोस् तरिका सहितः आजबाट आफ्नो सवारी साधनको राजस्व र ब्लुबुक नबिकरण अनलाइनबाट नै गर्न सकिने भएको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारले आजदेखि लागू हुने गरी लाइसेन्स शुल्क, ब्लुबुक नवीकरण शुल्क, जरीवाना शुल्क, बीमालगायतका काम अनलाइनबाटै हुनेछन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यो सेवाको सुरुवातको उद्घाटन गरेका छन ।
यसरी तिर्नुहोस आफ्नो सवारीको राजस्व र नबिकरणः www.tmis.bagamati.gov.np वेबसाइटमा गएर सवारीधनीले आफ्नो नम्बर राखेर खाता खोल्नुहोस। त्यहाँ गए पछी आफ्नो सवारीको सम्पूर्ण विवरण राख्नुहोस । सम्पूर्ण विवरण भरेपछि आफुले तिर्नु पर्ने राजस्व र नबिकरण गर्ने समयमा त्यहिबाट गर्नुहोस । रकम भुक्तानीका लागि डेबिट कार्ड तथा क्रेडिटकार्ड, मोबाइल वालेट, ई–बैंकिङ जस्ता डिजिटल सेवा प्रदायकमार्फत गर्न सकिने । यस प्रणालीको उद्घाटन र डेमो यहाँबाट हेर्नुहोसः